Orylọ ọrụ njem - HUATAO GROUP LTD
Atalọ ọrụ Huatao bụ ụlọ ọrụ ahịa zuru ezu nke dabeere na China Land, na-elekwasị anya na ụdị ụdị mbubata na mbupụ azụmahịa, mbubata mbubata, na-ebupụ ndị nnọchi anya, na-azụta ndị ọrụ, dị ka ndị ahịa chọrọ iji nye ọrụ ahaziri iche. The ụlọ ọrụ nwere a dịgasị iche iche nke azụmahịa, tumadi na-enye ngwaahịa na ọrụ ka akwụkwọ pulping ụlọ ọrụ, obibi akwụkwọ na nkwakọ ụlọ ọrụ, mwube engineering ma ọ bụ geotechnical ụlọ ihe ụlọ ọrụ, aluminum extrusion, elu okpomọkụ okpomọkụ nyefe-ebi akwụkwọ, Ngwuputa ihuenyo ụlọ ọrụ, nkà mmụta banyere ígwè na nsị. Ourlọ ọrụ anyị ewebatala ngwa ọrụ mmepụta ihe nke ụwa, ngwa nyocha a pụrụ ịdabere na ya yana usoro njikwa njikwa siri ike iji hụ na ngwaahịa tozuru oke na ụlọ ọrụ mmepụta ihe 100%.
1. 1. Usoro Geosynthetic Fabric Production:
2. Industrial akwa nhazi osisi ：
3. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ igwe na-emepụta ahịrị:
4. Akwụkwọ igwe oru ngo:
Anyị ụlọ ọrụ na-anabata ihe ọ bụla OEM iji nhazi na mmepụta, anyị ga-nditịm dị ka ndị ahịa chọrọ nke ihe onwunwe, nkọwa, nkwakọ ngwaahịa na ndị ọzọ chọrọ maka sample customization, sample ule mgbe ruru eru na ndokwa nke uka mmepụta. Iji hụ na afọ ojuju afọ ojuju.
Anyị factory, dị ka a na-eduga enterprise nke geotechnical ihe na China, nwere a akụkọ ihe mere eme nke R & D na mmepụta n'ihi na ihe karịrị afọ 40.The ụlọ ọrụ nwere 50 ọkachamara sayensị na nkà na ụzụ R & Dtechnicians:
Polyweb Urethane ihuenyo ntupu, Airgel blanket, Corrugator echebe, Ihuenyo ntupu, Derrick ihuenyo ntupu, Nchekwa onwe-nhicha ihuenyo ntupu,